के हो नागमणी? मानिसहरु किन करोडौ पैसाको खेलवाड हुन्छ ? के फाईदा हुन्छ ? ईच्छाधारी र नागमणी बारे खास कुरो पढ्नुहोस ! « Npnews
के हो नागमणी? मानिसहरु किन करोडौ पैसाको खेलवाड हुन्छ ? के फाईदा हुन्छ ? ईच्छाधारी र नागमणी बारे खास कुरो पढ्नुहोस !
एजेन्सी। सर्प यस्तो जीव हो जुन मानिसको लागि सदियौं देखि चासोको केन्द्र बन्दै आएको छ। सर्पको बारेमा अहिलेसम्म हजारौं खोज अनि अनुसन्धान भइसकेको छ तर पनि अझै यो जीवको सबै रहस्य खुलिसकेको छैन। पौराणिककाल देखिनै सर्पसंग जोडिएका सयौं मान्यता समाजमा फैलिएका छन्। यी मान्यतामा केही अन्धविश्वास पनि नजोडिएका हैनन, जुन सदियौं देखि डरका कारण बन्दै आएका पनि छन्। यहाँ सर्पसंग जोडिएका यस्तै अन्धविश्वासको बारेमा चर्चा हुदैछ,
मणिधारी नाग साच्चैको हुन्छ?
के नाग इच्छाधारी हुन्छ?
सर्पले दुध पिउँछ र?